Umnotho ongaphansi komhlaba: uyini futhi iyini imiphumela | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 22/05/2021 09:27 | Umnotho jikelele
Umnotho wabansundu akuyona into eyavela muva nje eminyakeni embalwa eyedlule. Futhi akuyona eyeSpain kuphela; empeleni bezungeze umhlaba isikhathi eside, eside. Kodwa-ke, le ndlela yokuhambisa imali ingaqeda ukuletha imiphumela emibi kakhulu ezweni.
Kodwa, Uyini ngempela umnotho wabamnyama? Uhluke kanjani emnothweni ongekho emthethweni noma ongakahleleki? Inamiphi imiphumela? Sizobhekana nakho konke lokho nokunye okuningi ngezansi.
1 Uyini umnotho wabamnyama
1.1 Umnotho ocwilile, ongekho emthethweni nongakahleleki
2 Izimbangela zomnotho B
3 Imiphumela engaqeda izwe
4 Umnotho omnyama eSpain
Uyini umnotho wabamnyama
Umnotho wabamnyama kufanele uqondwe njengendlela "imali emnyama" edlula ngayo ezweni. Ngamanye amagama, kukhulunywa ngokuthengiselana okwehlukile kwezomnotho okwenziwa phakathi kwezinkampani, abantu, njll. nokuthi azimenyezelwa kuziphathimandla zezimali ezifanelekile noma ezezimali.
Un isibonelo somnotho omnyama kungaba okulandelayo:
Ake uzicabange ungumdwebi. Ukwenza lokho futhi unamakhasimende owakhokhisayo ngezinsizakalo zakho. Kodwa-ke, elinye lamakhasimende linquma ukukukhokha ngokheshi futhi alifuni i-invoice noma yini ekhombisa ukuthi umsebenzele. Futhi uyayemukela, kepha awuyimemezeli leyo mali ngoba awudingi ukuyithethelela.
Lokhu kuhlobene, ngakho-ke, "nenkokhelo ku-B", njengemali etholakele "ngaphansi kwe-hood" noma ngendlela okunzima kakhulu ukuyilandelela (imvamisa imali isesandleni, ngoba yile ndlela akudingeki ukuthi uthethelele it).
Futhi yize ekuqaleni umnotho ongaphansi komhlaba wawuyiyona eyayigxile emisebenzini yayo ekuthengisweni kwezidakamizwa, ukushushumbiswa kwabantu kanye nokuthengiselana kwezentengiselwano lapho kwakungakhokhiswa intela, manje bakhomba neminye imikhakha ejwayelekile: izinsizakalo, ukudla, njll.
Umnotho ocwilile, ongekho emthethweni nongakahleleki
Okunye ukwehluleka uma kukhulunywa ngokuqonda umqondo womnotho wezithunzi ukudida uhlobo lokuthengiselana olutholakala "emakethe emnyama", okungukuthi:
Umnotho ongekho emthethweni, ukuthi kungukuthengiselana okwenziwa nezinto ezingavunyelwe, njengezikhali, abantu, izidakamizwa ...
Umnotho ongakahleleki, okungaba yimisebenzi engamenyezelwa, yize isemthethweni.
Empeleni, umnotho ongaphansi komhlaba uyibo bonke, abekho emthethweni futhi abangahlelekile, ngoba bayingxenye yeqembu elikhudlwana eliwakhayo, futhi yize igama elithi "imakethe emnyama" libhekisa kakhulu emnothweni ongekho emthethweni, iqiniso ukuthi Imakethe yansuku zonke kukhona nokuba khona okuqinile komnotho ongakahleleki (futhi ngenxa yalokho ucwilisiwe).
Izimbangela zomnotho B
Kungani kwavela umnotho wabantu abamnyama? Lo ngumbuzo omuhle, futhi kuzoba nabaningi abathandanayo nabanye abamelene nawo. Izizathu nazo zizohluka ngokuya ngokuthi ngabe usohlangothini olulodwa noma kolunye, okusho ukuthi, kuya ngokuthi ungumthengi noma ungumthengisi.
Uma ungumthengi, izizathu zokuthi kungani ungakhetha umnotho wabamnyama ngabe:
Thola umkhiqizo ngezindleko eziphansi.
Thola imikhiqizo engeke yathengwa ngenye indlela (ngokusemthethweni).
Como umthengisi, izizathu ziyafana:
Thengisa eshibhile ngakho-ke inani elikhulu.
Akudingeki ukuthi uthethelele leyo mali.
Ungayikhokhi intela kuleyo mali, ehlala "iyikho konke" kumthengisi.
Naphezu kwakho konke lokhu okungenhla, kufanele sikhumbule esakusho ekuqaleni: umnotho ongaphansi komhlaba ungaba nemiphumela emibi kakhulu ezweni. Futhi sizokutshela ukuthi iziphi.
Imiphumela engaqeda izwe
Kwabaningi, iqiniso lokukhokhisa okuthile futhi wazi ukuthi akudingeki ukuthi umemezele ngalo noma ukhokhe izintela zento ethile eyenziwe ngumuntu nokuzikhandla kwakhe ngokwakho kunengqondo kakhulu. Inkinga ukuthi, uma sonke sikwenza lokho, ngabe azikho izibhedlela, imigwaqo, nempilo ... Ngoba akekho umuntu obengafaka isandla ezweni ukuze lezi zinto zenziwe.
Futhi lowo ngomunye wemiphumela emikhulu yezomnotho ongaphansi komhlaba, hhayi intela uqobo lwayo, kepha ukulahleka kwaleyo mali eqoqwayo ukuze ikwazi ukuyitshala ekuthuthukiseni izwe nasekudaleni ukuthuthuka kwenzuzo yabantu bonke.
Kuyacaca ukuthi umnotho ongaphansi komhlaba ngokwawo udala umsebenzi; kodwa ngokulahlekelwa kweminye imisebenzi eyanyamalalayo. Futhi izinkampani, nabasebenzi abasebenza ngokusemthethweni, abahambisana nentela, izinkokhelo, njll. Abakwazi ukuncintisana nabanye abanezindleko eziphansi, abaziphoqelela ukuthi bavale, badele.
Endabeni kahulumeni, ilahlekelwa yimali, leyo ebingasetshenziselwa izinsizakalo zezakhamizi, futhi ngenxa yalokho, izwe liqala ukuswela lokho umuntu angakudinga kakhulu.
Kepha futhi ezingeni ngalinye kunemiphumela emibi. Futhi yilokho Labo bantu abasebenzayo abanalo ilungelo lokungasebenzi, noma lokuthatha umhlalaphansi uma kunesidingo, ngoba, kwezokuphepha Komphakathi, lowo muntu akasebenzi futhi, ngakho-ke, akukho lutho oluhambelana naye.
Ngokusobala, uma 'ubanjwa' wenza inkohliso kwezomnotho omnyama, lokho ngeke kusho inhlawulo 'ethambile' Ungabhekana nenhlawulo ngisho nokugwetshwa ejele ngokusebenzisa le mikhuba engekho emthethweni. Futhi cha, insizakalo oyinikezayo ayikho emthethweni (ngaphandle kwezibonelo esizibonile zomnotho ongekho emthethweni), kodwa, kuzo zonke izimo, igwema intela.
Eminye yemiphumela edalwe umnotho ongaphansi komhlaba ithinta ngqo abathengi; futhi yilokho Abakwazi ukufuna noma yini kumthengisi ngoba abanasiqinisekiso futhi namarisidi alowo msebenzi noma lowo mkhiqizo, ngakho-ke uma ehluleka, ephukile, enziwe ngomgunyathi noma entshontshiwe, baba yizisulu zabo "zokukhwabanisa" kwabo.
Umnotho omnyama eSpain
ESpain, eminyakeni embalwa eyedlule, yayinengaphezulu kwama-21% we-GDP yomnotho wabamnyama, okuyisibalo esiphakeme ngokwedlulele (futhi imvamisa sikhuluma ngokulinganisa ngoba asazi ncamashi iphesenti lokuthile okungenakulungiswa). Izinkinga zikhulisa lo mnotho ongaphansi komhlaba, hhayi kuphela emikhiqizweni engekho emthethweni, kodwa nakwimikhuba, ngoba bafuna ukuthola imali ngaphandle kokukhokha intela.
Ngaphandle kokuthi izindlela zokuvikela sezisunguliwe futhi zilawulwa ngokuphelele ukuvimbela ukuba khona kwalolu hlobo lomnotho, iyaqhubeka nokuba khona ezweni futhi, njengoba ohulumeni bomhlaba bebeke "iso" labo ekuqedeni, iSpain maqondana nabanye akukaze kwehluka kakhulu. Ngabe lokho kusho ukuthi sisafana? Yebo no cha.
Kukhona ukulinganisa ukuthi, phakathi kwabantu abayizigidi ezimbili noma ezinhlanu basebenza emnothweni ongaphansi komhlaba, Kungenxa yokuthi benza imisebenzi kamuva abangayimemezeli, noma ngoba bathengisa imikhiqizo engekho emthethweni. Iqiniso lokuvika intela, kanye nemithetho yezabasebenzi kungadala imiphumela emibi ezweni, ngoba iba mpofu.
Njengamanje, kunezinyathelo zokulwa nokukhwabanisa kwamabhange, ukuqedwa kwezikweletu zamanani aphezulu, ukuhlolwa ngezikhathi ezithile kwezokubalwa kwemali, ukuqedwa kwemali ekhokhwayo, njll. Konke lokhu kubambezela umnotho wabamnyama. Futhi yize lokho kunciphise futhi kwanciphisa ukuthengiselana kancane, kusekhona eSpain, njengakwamanye amazwe omhlaba.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umnotho ocwilile
Ungayithola kanjani imali ekhaya